Alarobia 05 Jiona 2019. – FJKM
Alarobia 05 Jiona 2019.
Asan’ny Apostoly 12.7-25
Hafatra telo no atolotra antsika eto :
1-Azo antoka ny herin’ny Tompo
Endrika iray ahitantsika izany ny fanafahana an’i Petera teto. Efa tena natao tsara ambina izy , saingy tsy nahasakana ny herin’ Andriamanitra tsy izany mandrakariva ny ataon’nyTompo satria i Jakoba dia voalaza fa novonoin’i Heroda (and2) ; saingy mahazo toky isika fa raha mbola misy ilan’ny Tompo antsika eto dia tsy avelany ho faty akory isika .
2-Mianara mandray valimbavaka
Voalazan’ny and 5 hoe: « ny Fiangonana nahery nangataka tamin’ Andriamanitra ho azy « kanjo nony azo tokoa ny valimbavaka ka tafavoaka avy tao an-tranomaizina i Petera ,dia tsy nino indray ireo olona niari-tory nivavaka ho azy . Moa tsy fahalemena mpahazo antsika koa izany ? Soa ihany fa tsy nihevitra loatra izany tsy finoantsika ny valimbavaka omeny izany ny Tompo , ka manaiky hamaly vavaka antsika ihany. Na izany aza dia miovà.
3-Tandremo ny fireharehana
Ambaran’ny and 23 dia nasian’ny anjelin’ny Tompo i Heroda ka matin’ny kanakana.Ny antony : « nihobian’ny olona ho andriamanitra izy « , tsy nanitsy izany izy fa nanaiky . Fampitandremana lehibe ho antsika izany . Tsarovy ny Isaia 42.8.
« Raiso ny Tenin’ Andiamanitra » Boky faha-8